पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, विश्वव्यापी चर्च अफ गॉड स्विजरल्याण्ड (WKG)
बुबा परमेश्वर हुनुहुन्छ, र छोरा ईश्वर हुनुहुन्छ, र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। केहि बेर प्रतिक्षा गर्नुहोस्, केही व्यक्ति भन्छन्। «एक प्लस वन प्लस वन बराबर एक? त्यो सत्य हुन सक्दैन। यसले मात्र काम गर्दैन। »
ठीक छ, यसले काम गर्दैन - र यो पनि हुँदैन। भगवान थप्नको लागि "चीज" होइन। त्यहाँ केवल एक मात्र सर्वशक्तिमान्, ज्ञानी, सर्वव्यापी हुन सक्छ - त्यसैले त्यहाँ एक मात्र परमेश्वर हुन सक्नुहुन्छ। आत्माको संसारमा, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एकजुट हुनुहुन्छ कि भौतिक वस्तुहरू हुन सक्दैनन्। हाम्रो गणित भौतिक चीजहरूमा आधारित छ; यो जहिले पनि असीमित, आध्यात्मिक आयाममा काम गर्दैन।
बुबा परमेश्वर हुनुहुन्छ र छोरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो ईश्वरीय प्राणीहरूको परिवार वा समिति होइन - एउटा समूहले भन्न सक्दैन: "म जस्तो कोही पनि छैन"। (यशैया। 43,10.१०; .44,6 45,5..XNUMX; .XNUMX.।) परमेश्वर केवल एक ईश्वरीय अस्तित्व हुनुहुन्छ - एक व्यक्ति भन्दा बढि, तर केवल भगवान। प्रारम्भिक इसाईहरूले मूर्तिपूजक वा दर्शनबाट यो धारणा पाएनन् - उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा धर्मशास्त्रद्वारा बाध्य पारियो।
जसरी धर्मशास्त्रले सिकाउँदछ कि ख्रीष्ट ईश्वरीय हुनुहुन्छ, यसले पवित्र आत्मा ईश्वरीय र व्यक्तिगत हो भनेर सिकाउँछ। पवित्र आत्माले जे गर्छ, परमेश्वर गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसरी छोरा र बुबा हुनुहुन्छ - तीन व्यक्ति जो पूर्ण रूपमा एक परमेश्वरमा एक भएका छन्: त्रिएक।
ख्रीष्टको प्रार्थनाको प्रश्न
प्रश्न प्राय: सोधिन्छ: किनकि परमेश्वर एक हुनुहुन्छ (एक) किन येशूले बुबालाई प्रार्थना गर्नुपरेको थियो? यस प्रश्नको पछाडि परमेश्वरको एकता येशू हुनुहुन्छ भन्ने धारणा रहेको छ (जो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो) ले बुबालाई प्रार्थना गर्न दिनुभएन। भगवान एक हुनुहुन्छ। त्यसोभए येशूले कसलाई प्रार्थना गर्नुभयो? यस चित्रले चार महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई बेवास्ता गर्यो जुन हामीले प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हामीले स्पष्ट गर्नु पर्छ। पहिलो बुँदा भनेको यो थियो कि "वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो" भन्ने भनाइले परमेश्वर केवल लोगोहरू [शब्द] मात्र हुनुहुन्न भनेर पुष्टि गर्दैन। "भगवान" अभिव्यक्तिमा "र परमेश्वर शब्द हुनुहुन्थ्यो" (यूहन्ना १,१) उपयुक्त नामको रूपमा प्रयोग भएको छैन। शव्दको अर्थ भनेको लोगोहरू ईश्वरीय थियो - कि लोगोहरू परमेश्वर जस्तै एउटै प्रकृति थिए - एक प्राणी, एक प्रकृति। "लोगोहरू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो" भन्ने अभिव्यक्तिको अर्थ "लोगोस परमेश्वर मात्र हुनुहुन्थ्यो" भन्ने धारणा गर्न यो गल्ती हो। यस दृष्टिकोणबाट यो अभिव्यक्तिले ख्रीष्टलाई पितालाई प्रार्थना गर्नबाट रोक्दैन। अर्को शब्दमा, त्यहाँ एक ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र त्यहाँ एक पिता हुनुहुन्छ, र जब पिताले प्रार्थना गर्दा कुनै असंगति हुँदैन।
दोस्रो कुरा जसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ कि लोगोहरू मासु भयो (यूहन्ना १:1,14:१) यस कथनले भन्छ कि परमेश्वरका लोगोहरू वास्तवमै मानव बन्नुभयो - शाब्दिक, सीमित मानव, आफ्ना सबै गुणहरू र सीमितताहरूले जुन मानिसहरूलाई व्यक्त गर्दछ। मानव स्वभावको साथ जानका लागि उनका सबै आवश्यकताहरू थिए। उहाँलाई बाँच्नको लागि खानाको खाँचो पर्थ्यो, उसलाई आध्यात्मिक र भावनात्मक आवश्यकताहरू पनि थिए, जसमा प्रार्थनामार्फत परमेश्वरसँग स fellow्गत गर्नु पनि समावेश थियो। यो आवश्यकता निम्नमा स्पष्ट हुनेछ।
तेस्रो कुरा जुन स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ त्यो हो पाप रहित। प्रार्थना केवल पापीहरूको लागि मात्र होइन; एक पापरहित व्यक्तिले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न र मद्दत लिन सक्छ। मानव, सीमित व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ, परमेश्वरसँगको स fellow्गति हुनै पर्छ। मानव जाति येशू ख्रीष्टले असीमित परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपरेको थियो।
यसले उही बिन्दुमा गरिएको चौथो गल्तीलाई सुधार्नु पर्ने आवश्यकतालाई औँल्याउँछ: प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ भन्ने धारणाले प्रार्थना गरिरहेको व्यक्ति मानव हो भनेर प्रमाणित गर्दछ। यो धारणा धेरै व्यक्तिको दिमागमा प्रार्थनाको विकृत दृष्टिकोणबाट आएको छ - यो दृष्टिकोणबाट कि मानव असिद्धता प्रार्थनाको एक मात्र आधार हो। यो दृष्टिकोण बाइबल वा भगवानले प्रकट गर्नुभएको कुनै पनि कुराको होईन। आदमले पाप नगरे पनि प्रार्थना गर्नुपर्ने थियो। उहाँको पापरहितपनले उसको प्रार्थनालाई अनावश्यक बनाउँदैन थियो। ख्रीष्ट त्रुटिरहित भए पनि प्रार्थना गर्नुभयो।
माथी माथी मा स्पष्टीकरण को साथ, प्रश्न उत्तर गर्न सकिन्छ। ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पिता हुनुहुन्नथ्यो (वा पवित्र आत्मा); उसले बुबालाई प्रार्थना गर्न सक्थ्यो। ख्रीष्ट पनि एक मानव हुनुहुन्थ्यो - एक सीमित, शाब्दिक सीमित मानव; उसले बुबालाई प्रार्थना गर्नुपरेको थियो। ख्रीष्ट पनि नयाँ आदम हुनुहुन्थ्यो - आदम हुनुपर्ने सिद्ध मानिसको उदाहरण; उनी परमेश्वरसंग लगातार कुराकानी गरिरहेका थिए। ख्रीष्ट मानव भन्दा धेरै हुनुहुन्थ्यो - र प्रार्थनाले यस स्थितिलाई परिवर्तन गर्दैन; उनले परमेश्वरको पुत्रको रूपमा प्रार्थना गरे, जो मानिस बनेको थियो। प्रार्थना मानिसबाट भन्दा अयोग्य वा अनावश्यक हो भन्ने विश्वास परमेश्वरको प्रकाशबाट आएको होइन।